MCC: उल्टो यात्राको खतरामा नेकपा
सायद २०६८-६९ तिर होला। त्यो बेला माओवादी आन्दोलन सिंगै थियो, मेरो मतलब टुक्रिएको थिएन। बुटवलको रुपन्देही उद्दोग संघको सभाहलमा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ती संबन्धी एउटा अन्तर्कृयामा मैले माओवादी र एमालेको एकता नै नयाँ शक्ती निर्माणको सुरुवात हो र तपाइले त्यसैको लागी पहल गर्नु पर्छ भन्दा उपस्थित भिडले म ‘फुच्चे’लाई संशोधनबादी आखाँले हेरेको थियो।
तत्कालिन माओबादी आन्दोलनको बिचार ब्यबस्थित थियो किन कि त्यहा दुइ चिन्तक थिए मोहन बैध्य ‘किरण’ र डा. बाबुराम भट्टराई। र, एक नेता थिए प्रचण्ड जसले दुइ चिन्तकका बिचार समयानुकुल लागु गर्ने क्षमता राख्थे। उता एमाले सगं भएको संगठनको मजबुत जग चै नेताद्वय मदन भण्डारि र जिबराज आश्रीतले हालिदिएका हुन। दासढुङ्गापछि संगठनमा बैचारिक पक्ष कमजोर हुँदा पात झरिसके पनि माधब नेपाल र झलनाथ खनालहरुले संगठनको रुख चै बचाइराखेका थिए। जसमा बिचार संचार गर्न सके साच्चै हरियाली छाउने मैले देखिरहेको थिएँ।
साथै, तत्कालीन इस्युमा केहि मतभेद मात्र हो। तर, मुलभुत बिषयमा एमाले र माओवादी एउटै बिन्दुमा आइसकेकाछ्न भन्ने भेउ मैले उतिबेलै पाइसकेको थिए। र, माओबादी आन्दोलनले आफ्ना बिचारलाइ संगठित गर्न नसक्ने र एमालेमा संगठनलाइ नेतृत्व दिने बिचार मरिसकेको पनि बुझ्दै थिए। जुन माओबादी र एमाले नेतृत्वले धेरै पछि मात्र बुझ्यो। तर त्यतीबेला समय घर्किसकेको थियो। माओबादीका बिचारक किरण र डा. भट्टराई धेरै पर पुगिसकेका थिए भने खड्ग ओलिको आगमन पश्चात एमाले संगठनमा महेश बस्नेत र नबिना लामाहरु रोलमोडेल बन्दै थिए।
तत्कालीन नेकपा (एकीकृत) को एक प्रशिक्षणमा नेता युबराज पन्थि भन्नु हुन्थ्यो- दार्शनिक सुकरातलाइ एक सुन्दरीले बिहेको प्रस्ताव गरिन र भनिन, तपाइ अत्यन्तै कुरुप हुनुहुन्छ तर बुद्धिमान हुनुहुन्छ। तपाइ र मेरो बिहे पश्चात, मेरोजस्तो रुप र तपाइको जस्तो दिमाग भएको बच्चा जन्मियो भने, उ संसारकै सुन्दर र बुद्धिमान मान्छे हुनेछ।” त्यसपछी सुकरातले जवाफ दिए-“तिमिले भनेको जस्तो भए त ठिक छ तर ठिक उल्टो, मेरो जस्तो रुप र तिम्रो जस्तो दिमाग भएको बच्चा जन्मियो भने उक्त मान्छे इतिहासकै कुरुप र मुर्ख हुनेछ।” दुर्भाग्य; आज नेकपामा सुकरातले भने जस्तै ‘उल्टो’ हुने खतरा बढेकोछ। बैचारिक स्तर नभएका ‘लाठे’ कार्यकर्ता र थामी नसक्नुको जम्बो संगठन अनि महाकाली भन्दा घातक MCC को यात्रा यसका गतिला उदाहरण हुन।
ट्यागहरू: #MCC #बिष्णुपोखरेल #नेकपा
स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता र बिकासका लागि '१२ इन १२ आउट'
आफ्नै टाउकोमा आगो लगाउने ५ तथ्य